Icandelo laseShanghai Duxia kunye noRhwebo
Umatshini wokuqhekeza ifilimu
Umatshini wokwenza iplasitiki ngeplastiki
PP ephothiweyo umatshini ibhegi
Umatshini wokurisayikilisha wePlastiki
Uyikhetha njani into yokuba umatshini wefilimu ophefumlelweyo we-PE / umatshini wokuhambisa umboniso wefilimu?
Iimfuneko ezisisiseko zentsebenzo yefilimu yeplastiki
Imiba efuna ingqwalaselo kumsebenzi wesilayidi somatshini
Ukujongana njani nemibala esithoba inzima kumatshini wokushicilela?
Uqhoqhoqho Machine Operation Encyclopedia
i-masterbatch yokugcwalisa kwinkqubo yokubetha ifilimu
Inkqubo yokubetha ifilimu ye-LDPE ineendawo ezine zolawulo
Uphuhliso lwezenzululwazi kunye nezinto ezintsha zobuchwepheshe kumatshini wokwenza ibhegi yeplastiki
Iplastiki ye-granulator / yeplastiki yokurisayikilisha iimfuno zomsebenzi
Iingxaki eziqhelekileyo kumatshini wokwenza iplastiki
Umahluko phakathi komatshini wokushicilela we-flexo kunye nomatshini wokushicilela we-gravure
Iilwimi ezili-108 kwikona ephezulu ngasekunene
Yenza OOMATSHINI BOKUGQIBELA BOKUGQIBELA ETshayina
Yenza uphawu lomgangatho wehlabathi!
Ishishini laseShanghai Duxia kunye noRhwebo Co., Ltd.yishishini eligxile ekuveliseni oomatshini bokupakisha beplastiki. Inkampani yethu yasekwa ngo-2002 kwaye ibekwe e Ruian City, kwiPhondo Zhejiang, kunxweme loLwandle East China. Saseka iofisi e-Shanghai ngo-2017. Le nkampani igubungela ummandla ongaphezulu kwe-3,000 yeemitha zesikwere. Kukho abasebenzi abangaphezulu kwe-100 kunye namagcisa angaphezu kwe-10. Sinamandla obuchwephesha, izixhobo zokwenza izinto ezinobunkunkqele, iindlela zovavanyo olupheleleyo, kunye nomatshini wokubetha ifilimu. Iimveliso ezinjalo zineempawu zenqanaba lokugcina eliphantsi, ukusetyenziswa kwexesha elide, ukusebenza kakuhle, ingxolo ephantsi, njl njl, kunye nolawulo lomgangatho wobunzululwazi kunye nenkonzo ziye zathenjwa ngabathengi.
Ezona mveliso ziphambili zeShanghai Duxia Industry and Trade Co., Ltd.: umatshini wokuvutha ifilimu, umatshini wokushicilela, umatshini wokwenza iplastiki, umatshini wokurisayikilisha weplastiki.
Imveliso yethu ephambili
Ifilimu ebetha umatshini
Ungayikhetha njani umatshini ofanelekileyo wokuvutha ifilimu
Umatshini wokuvuthela ifilimu ngumatshini ofudumeza kwaye unyibilikise amasuntswana eplastiki emva koko uvuthele kwifilimu. Kukho oomatshini befilimu abavuthelweyo abasebenzisa i-PE, i-POF, i-PVC, i-PP njengezinto eziphathekayo zokuvelisa...... .
Ukuprintwa kweflexographic kunye neenkqubo zokuprinta i-gravure zinezibonelelo zazo. Izibonelelo zoshicilelo lweflexographic zezi: zilungele ukushicilela okufutshane okanye ukuprinta kweemveliso ...
Ezona ntlobo ziphambili zeengxowa zeplastiki (1) Ingcinezelo ephezulu yeplastiki yeplastiki. (2) ingxowa yeplastiki yeplastiki yoxinzelelo oluphantsi. (3) Polypropylene ingxowa yeplastiki (4) iingxowa zeplastiki PVC ...
Intshayelelo granulator zeplastiki
Umzimba ophambili weplastikhi yeplastikhi yinto ekhutshelweyo, ebunjwe yinkqubo ye-extrusion, inkqubo yokuhambisa kunye nenkqubo yokufudumeza nokupholisa ...
Umatshini wokurisayikilisha kaPlastiki
Umlawuli wentengiso: Sasha Liu
Iselfowuni / WhatsApp: +8615221892684
Umphathi wentengiso: Andre Xu
Iselfowuni / WhatsApp: +8613564398120
I-Facebook-f Twitter UGoogle-plus-g Youtube Instagram
© Onke amalungelo agcinwe yi-Shanghai Duxia Industry and Trade Co., Ltd.
Shiya ulwazi lwakho, ukuthengisa kwethu kuya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza!